Mishonga yakanyanya yakatemerwa ye2019 - Kambani, Info Info | Chikunguru 2021
Dhinda Kambani, Nhau Nhau Kambani, Hutano Dzidzo Nharaunda Zvinodhaka Vs. Shamwari Hutano Dzidzo, Zvipfuwo Kambani, Info Info Kambani Zvinodhaka Info Zvipfuwo Hutano Dzidzo, Nhau Info Info, Nhau Hutano Dzidzo, Hutano Dzidzo Yehutano
Kuru >> Kambani, Info Info >> Ona mishonga yakatemerwa zvakanyanya muna 2019
Nepo kadhi reSingleCare richiendesa mari zviuru nezviuru zvemishonga yekunyorerwa, paive nemishonga gumi nemashanu yekushanda nesimba yaingoramba ichinyora runyorwa rwedu ruzere muna 2019. Uye kunyangwe paive nemwaka unooneka mudata (zvirevo zvebronchodilator albuterol yakakwira panguva yechando -yakangoita mwedzi yechando, semuenzaniso), yakawanda, mashandisiro emashandisirwo akaramba achienderana kubva pamwedzi-kusvika-mwedzi
Heano akanyanya kudomwa madhiragi e2019:
Shamwari yepamusoro Zita rekushandisa Izvo zvayashandiswa
Levothyroxine sodium Synthroid Hypothyroidism
Albuterol sulphate Ventolin HFA, ProAir HFA, Proventil HFA Chirwere uye COPD
Lisinopril Zestril, Prinivil Yakakwira BP, moyo kutadza, inoderedza njodzi yekufa mushure mekurwadziwa kwemoyo
Amoxicillin Amoxil Mishonga inorwisa mabhakitiriya
Amlodipine besylate Norvasc Kuwedzera kweropa, kurwadziwa pachipfuva
Ibuprofen Motrin Marwadzo, kuzvimba
1. Levothyroxine sodium
Iyi thyroid yekutsiva mahormone yaive Nha. 1 yakazadza mushonga pakati pevashandisi veKegaCare kadhi yemwedzi wega wega we2019. Kuzivikanwa hakushamisi kuna Bethesda, Maryland-based primary care chiremba uye internist. Matthew Mintz, MD, uyo anoti kuve neiyo yakaderera thyroid ngazi (inonzi hypothyroidism) hazvishamise.
Pedyo ne4% yevagari vemuUS vane hypothyroidism, anotsanangura. Kune akasiyana zvinokonzera hypothyroidism , kusanganisira autoimmune chirwereHashimoto's thyroiditis, radiation radiation, uye mamwe marudzi emishonga.Kuruboshwe kusarapwa, hypothyroidism inogona kutungamira kumamiriro ezvinhu sekufutisa, kushaya mbereko, kurwadziwa kwemajoini, uye chirwere chemwoyo.
piri. Albuterol sulphate
Albuterolbronchodilator-kazhinji mune inhaler fomu - iyo inokurumidza kubatsira kuvhura nzira dzepamhepo kune avo vanorwara neasthma uyechisingaperi obstructive pulmonary chirwere (COPD). Zvirwere zvese izvi zvakajairika, uye vanhu vanopfuura mamirioni makumi maviri nemashanu muU.S. (kusanganisira vana mamirioni manomwe) vanoonekwa kuti vane asima, anodaro Dr. Vanenge mamirioni gumi nematanhatu vanhu muUS vane COPD (inosanganisira emphysema), kazhinji kune vakuru, uye kazhinji kechipiri pakuputa.
unotora nguva yakareba sei kuronga b kusvika
Albuterol inokurumidza-mishonga yekubatsira iyo inowanzo shandiswa sekununura inhaler pazvinenge zvichidikanwa. Varwere vanotora albuterol kazhinji vanotorawo zuva nezuva mishonga yekudzivirira. Albuterol yaive yechipiri-yakazadza mushonga wemwedzi mishanu yekutanga ye2019 -uye pane chikonzero nei kushandiswa kwezvinodhaka kwakanyanya pakutanga kwegore, sekureva kwaDr Mintz. Varwere vane zvirwere zvekufema vanowedzera kuwanda munguva yechando apo vanowanzoita dzihwa zhinji, anodaro.
Mushonga weBP uyu wakarongedzwa padyo nepamusoro peimwe runyorwa rweSingleCare - uchichinjanisa pakati pechinzvimbo chechitatu nechina kwemwedzi mishanu yekutanga yegore, usati wasvika pachinzvimbo chechipiri muna Chikumi uye wakaramba wakadzikama kusvika munaMbudzi. [Kumusoro]BP yakanyanya kuU.S., anodaro Dr. Mintz. Kutaura, maererano ne Nzvimbo dzekudzivirira nekudzivirira hosha (CDC), 75 mamirioni vakuru veAmerica (chetatu chevakuru) vane BP yakakwira.
Lisinopril iri mukirasi yemishonga inozivikanwa seACE inhibitors, iyo inoshanda kuzorodza tsinga uye tsinga uye kubatsira kudzikisa BP. ACE inhibitors vanowanzo kuve vanodikanwa nekuti vanoita kunge vane mashoma mashoma mhedzisiro yemamwe ese makirasi emishonga, anodaro Dr. Mintz. Chimwe chikamu chakakurumbira chakafanana neACE inhibitors angiotensin receptor blockers kana maARB. Ivo vane kunyange mashoma mashoma mhedzisiro. Nekudaro, nguva pfupi yadarika kwave nekumwe kurangarira kwemaARB nekuda kwezvinhu zvekugadzira, saka vamwe varwere vari kuchinja kubva kumaARB vachienda kuACE inhibitors, senge lisinopril.
Lisinopril inogonawo kunyorerwa kune varwere vane kutadza kwemoyo kana avo vachangobva kurwadziwa nemoyo.
Iyi jack-ye-yese-inotengesa mishonga inorwisa mabhakitiriya yakashambadzirwa mukuzivikanwa kubva pamwedzi kusvika pamwedzi, ichitaridzika kunge yechipiri uye yakaderera seyechishanu. Amoxicillin iri mumhuri yepenicillin yemishonga inorwisa mabhakitiriya, uye inoshandiswa kurapa hutachiona hwakasiyana siyana, anodaro. Chiremba Jennifer Haythe, MD , anotungamira cardiologist muNew York uye co-director weWomen's Center yeCardiovascular Health kuColumbia University. Izvi zvinosanganisira strep huro, sinusitis, bronchitis, mabayo, hutachiona hutachiona, uye humwe weti uye hutachiona hutachiona.
unogona here kutora motrin nekunwa doro
Amoxicillin (kana chero mushonga unorwisa mabhakitiriya!) Haishande kune hutachiona hutachiona, senge kutonhora kana dzihwa, uye haifanire kutorwa kune iwo mamiriro, nekuti izvo zvinogona kuwedzera kurwisa mabhakitiriya.
Mushonga wechipiri weBP weropa kumusoro pamusoro pechinyorwa, amlodipine ndiyo inozivikanwa secalcium chiteshi blocker, anodaro Dr. Haythe, uyo anoshanda nekushandura kufamba kwecalcium mumasero etsinga dzeropa nemoyo, nekudaro ichizorodza midziyo uye kudzikisa ropa. kumanikidza. [Iyo] inowanzo gadzirirwa BP, sezvo iri nyore kamwe - zuva nezuva dosing, ine mashoma mhedzisiro, uye inoregererwa, anodaro Dr. Haythe, achitsanangura mukurumbira wayo.
Kutenderera padyo nepakati peiyo yepamusoro 10 runyorwa yaive ibuprofen, inowanzozivikanwa nemazita ezita ayo akadai saAdvil naMotrin. Iyo NSAID, kana isiri-steroidal inopesana nekuzvimba, uye inoshandiswa kurapa aches nemarwadzo, fever, kutemwa nemazino, uye kutemwa nemusoro, anodaro Dr. Haythe.
Ibuprofen ndiye wekutanga asiri-aspirin NSAID kubvumidzwa kuti ishandiswe-pamusoro-pekutengesa kushandiswa , uye inoregererwa zvakanaka. Musiyano wechokwadi chete pakati pekunyorerwa ibuprofen uye OTC ibuprofen ndiyo muyero - iyo-ye-counter-mishonga inongokwira kusvika pamazana maviri emamiriyoni pahwendefa, nepo mishonga yekunyorera iripo kusvika pamazana masere emamiriyoni piritsi.
zvakadii vitamini d3 mukadzi anofanira kutora zuva nezuva
Mimwe mishonga kutenderedza mishonga yeScotCare yepamusoro nemwedzi muna 2019 rondedzero inosanganisira benzonatate (mushonga wekukosora), azithromycin (generic Z-Pak, mushonga unorwisa mabhakitiriya), zvideo (kucorticosteroid), cvoconline (Vhitamini D3), oseltamivir phosphate (generic Tamiflu, mushonga unorwisa hutachiona), zvidee (Vhitamini D2), amphetamine-dextroamphetamine (mushonga weADHD), atorvastatin calcium (Lipitor, statin), uye cetirizine HCl (Zyrtec, antihistamine).
Ruzivo rwakakurumbira rwemishonga yemishonga inoratidza zvinyorwa zvinonyanya kuzadzwa kuburikidza neSingleCare kubva munaNdira 1, 2019 kusvika Mbudzi 30, 2019, kusanganisa maopioid uye huremu-kurasikirwa nemishonga.
Chii chinonzi flu?
Urinary turakiti hutachiona mumadzimai epamba mishonga
chii chandingatora pamusoro pekambani yekuda kusvotwa
zvakajairwa kuzorora kurova kwemoyo kweane makore gumi nemasere mukadzi
chii chikamu muzana chevanhu vane chirwere cheshuga
bhodhoro re insulini rakawanda sei
inogona sudafed kukuita iwe kukundikana bvunzo yemushonga
chii chine clearitin d mairi